76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & The Hydra Stomper မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper
Lego အသစ် Marvel Avengers: Time Twisted ဇာတ်ကားက အခုထွက်ရှိနေပါပြီ။
22 / 01 / 2022 22 / 01 / 2022 Jack Yates 582 Views စာ 1 မှတ်ချက် ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Lego, lego ရုပ်ရှင်, Lego Marvel, Lego ရုပ်ရှင်, Marvel, Movie,, YouTube ကို ဖတ်ပြီးသားမိ 1
အသစ် LEGO Marvel Avengers ဇာတ်ကားကို အဖွဲ့အနေဖြင့် ယခုကြည့်ရှုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု အပြည့်အစုံဖြင့် ကြေညာထားသည်။
Marvel Captain C ကိုထုတ်ရန် ကာတွန်းများarter တစ်ကိုယ်တော်စီးရီး 2022
13 / 12 / 2021 14 / 12 / 2021 Matt Yeo 650 Views စာ0မှတ်ချက် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ဗိုလ်ကြီးဂarter, Disney+, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel ရုပ်ပြ, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Peggy ကို Carter, စတိဗ်ရော်ဂျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ဖတ်ပြီးသားမိ 1
ကာတွန်းကားမှာ သူမပါဝင်လာပြီးနောက် What If…? ရှိုး၊ ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံး Captain Carter သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ကိုယ်တော်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ Marvel ဇါတျရှငျဇါတျလိုကျ
Lego Marvel Hulkbuster သည် 2022 ခုနှစ်အတွက် ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်နေပါသည်။
02 / 11 / 2021 02 / 11 / 2021 Chris Wharfe 787 Views စာ0မှတ်ချက် 76105 The Hulkbuster: Ultron Edition ကို, 76178 နေ့စဉ် Bugle, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Hulkbuster ပါ, သံမဏိလူသား, Lego, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, ကောလာဟလာ, အဆိုပါ LEGO Group ဖတ်ပြီးသားမိ 2
အသစ် LEGO Marvel Hulkbuster တိုက်ရိုက်-to-consumer set သည် 2022 တွင် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီး နှစ်နှစ်ကျော်အကြာတွင်၊
Marvel Studios ၏ Hawkeye ပိုစတာသည် အဓိကဇာတ်ကောင်များ၏ အကောင်းဆုံးပုံစံကို ဖော်ပြသည်။
24 / 10 / 2021 24 / 10 / 2021 Jack Yates 556 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Hawkeye, ကိတ်ဆရာတော်, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, နံရံကပျကျွွောငာ ဖတ်ပြီးသားမိ 1
နောက်ဆုံးပေါ်ပိုစတာ Marvel Studios ၏ Hawkeye သည် စီးရီး၏ အဓိကဇာတ်ကောင်များကို အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုရန် ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
06 / 10 / 2021 07 / 10 / 2021 Jack Yates 1131 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်နှင့် The Hydra Stomper, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego Marvel, Marvel, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ဖတ်ပြီးသားမိ 2
04 / 10 / 2021 05 / 10 / 2021 Jack Yates 873 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဇာတျသိမျး, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, အသေးစား, သေးသေးလေး, နံရံကပျကျွွောငာ, ဆန်းစစ်ခြင်း, Thanos, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ဖတ်ပြီးသားမိ 1
29 / 09 / 2021 29 / 09 / 2021 Jack Yates 862 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Brad Winderbaum, ဗိုလ်ကြီးဂarter, Covid-19, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Marvel, ရာသီ 2, Watcher, တိုနီ Stark, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ဖတ်ပြီးသားမိ 2
18 / 09 / 2021 18 / 09 / 2021 Jack Yates 640 Views စာ 1 မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76100 တော်ဝင် Talon တိုက်လေယာဉ်တိုက်ခိုက်မှု, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Black က Panther, အုတ်ခဲ, Killmonger တဲ့, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, အလယ်တန်းစျေးကွက်, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ဖတ်ပြီးသားမိ 2
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 Jack Yates 682 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ကလင် Barton, Disney+, Hawkeye, ကိတ်ဆရာတော်, Lego, Lego Marvel, Loki, Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, နောကျတှဲရထား, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ဖတ်ပြီးသားမိ 2